DIMUQRADIYADDA – Somaliland First
Haddaba, qodabada ay tahay in lagu lifaaqayo xeerkani waa:
In gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka xusbi noqon karin musharaxa madaxwaynaha xusbiga. Haddii kale, waa inuu sanad ka hore iska casilo gudoomiyanimada xusbiga.
In xusbikasta loo diiwangaliyo tageerayaashooda. Waa in tageerayaasha Xusbigu soo xulan ergooyinka xusbiga (ama delegates). Kuwasi oo soo xulaya Gudida dhexe ee Xusbiga. Golaha dhexana waa in ay soo xulaan hogaanka xusbiga iyo musharaxiinta Golaha Deganka, Wakiilada iyo Musharaxiinta Madaxwaynaha iyo Madaxwayne ku xigeenka.